Nzvari dzinotakura pamuviri mazuva 90-99 dzichizvara vana vatatu kusvika vashanu. vana ava vane huremu 150-300gram panguva yokuzvarwa. Dindingwe rinozvarwa riiine mavara aro. Vana vanosiyana naamai pamwedzi 13-20 yekuzvarwa. Nzvari dzinoda kugara dzoga dzisingasangane nedzimwe kunze kwenguva iyo dzinenge dziri kurera vana vadzo. Dindingwe rinosvira kana vanhu kana richinge razvifunga. Panguva iyi ndipo panodzidziswa mwana weingwe zvinhi zvizhinji zvinosanganisira kuvhima.
Tsumo - "Dindingwe rinonakwa richakweva rimwe asi kana iro rokwehwa roti mavara azara ivhu".
Madzishe kare vaishongedzwa nedehwe redindingwe kuratidza hukuru nehumhare hwavo.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Dindingwe&oldid=49727"
Last edited on 21 Kukadzi 2017, at 09:04